5 taona tsy misy rivotra MW vaovao any Catalonia | Green Renewable
5 taona tsy misy rivotra MW vaovao any Catalonia
Tomàs Bigordà | | Angovo azo havaozina
Maharitra kokoa ny fijanonan'ny rivotra efa-taona any Catalonia. Hatramin'ny nanokafana ny toeram-piompiana rivotra Serra de Vilobí II tamin'ny Janoary 2013, tao amin'ny faritra Les Garrigues, dia tsy nisy herin'ny rivotra vaovao megawatt napetraka.
Ankoatr'izay, ny tetik'asa rivotra mandroso indrindra manararaotra ny angovo rivotra dia ilay mampiroborobo Fenosa Gasikara Fenosa ao amin'ny Terra Alta, izay efa ela be. Ny tetikasa dia natolotry ny Generalitat tamin'ny Oktobra 2010; noho izany, saika fito taona, ary mbola tsy naseho ampahibemaso ilay tetikasa.
Mampalahelo fa raha tazonina amin'ireto teny ireto ny hafainganan'ny famoronana angovo madio any Catalonia, dia ho sarotra ny hanatratra ireo tanjona napetraka ao Fifanarahana nasionaly ho an'ny tetezamita angovo any Catalonia. Ity fifanarahana nasionaly ity dia nametraka fa amin'ny 2050, 100% ny angovo farany any Catalonia dia havaozina indray ary amin'ny 2030 50% ny herinaratra dia avy amin'ny loharano madio.
Manoloana ny fomba fijery tsy mitobaka (noho ny elanelana misy eo amin'ny zava-misy sy izay kasaina), ireo fikambanam-barotra mifandraika amin'ny angovo azo havaozina ao Catalonia (APPA, EolicCat, Pimec, Unef ...) dia naneno ny fanairan'izy ireo. Mampitandrina an'izany daholo izy rehetra tsy ho vita ny fanatanterahana ny tanjona nifanarahana. Noho ireo antony rehetra ireo dia nampahafantarin'izy ireo tamin'ny fitantanana Catalan sy amin'ny hery politika rehetra ny filàna hanaiky ny drafitra mivaingana hanafainganana ny fampiharana ny angovo azo havaozina.
1 Tanjona sarotra sa tsy azo tanterahina?
1.1 Azo ovaina ve ny toe-javatra?
2 Fitsipika vaovao
3 Tsy misy sarany
3.1 Tsy tanteraka ny drafitra
4 Ilaina ny rafitra ara-dalàna vaovao
Tanjona sarotra sa tsy azo tanterahina?
Ny zava-misy ankehitriny any Catalonia dia miavaka amin'ny fiankinan-doha amin'ny angovo nokleary amin'ny teti-pamokarana herinaratra (mihoatra ny 54% dia avy amin'ny toby famokarana herinaratra, raha ampitahaina amin'ny 18% avy amin'ny loharanom-baovao azo havaozina, araka ny angon-drakitra 2015), miaraka amin'ny fitomboan'ny amin'ny fangatahana 0,7% isan-taona.
Azo ovaina ve ny toe-javatra?
Raha te ho tratra ny tanjona 2030 (tanjon'ny herinaratra 50% avy amin'ny loharanom-baovao azo havaozina), manomboka amin'ny taona 2019, 300 MW ny famokarana rivotra vaovao ary 300 MW taranaka vaovao iray hafa no tokony hapetraka isan-taona. taranaka photovoltaic. Raha atotaly dia 3.600 MW ny herin'ny rivotra ary ny 3.700 XNUMX photovoltaic hafa.
Amin'izany fomba izany, ny fanavaozana dia hahatratra 50% ny tinady (ny sisa ho avy entona voajanahary may ao anaty zavamaniry tsingerina mitambatra, fotodrafitrasa fandrindrana amin'ny sehatry ny indostria ary reacteur nokleary tokana mbola miasa).
Raha ny filazan'ny mpitantana ny EolicCat: mba hahatratrarana ireo tanjona ireo amin'ny fanavaozana dia ilaina ny mampiditra fanovana ny lalàna mifehy sy ovao ny sarintanin'ny rivotra any Catalonia (izay iorenan'ny teboka amin'ny faritany ahafahana mampiasa an'io loharano io), ka ireo faritra izay tsy mifanaraka amin'ny fampiharana ny toeram-piompiana rivotra, dia averina jerena mba hampiantrano io loharano madio io raha azo atao.
Nanampy ireo fikambanam-barotra fa tokony hovaina ny rafitra ankehitriny hampiroboroboana toeram-piompiana rivotra vaovao, mba hanasoavana ny fisian'ny fotodrafitrasa mihoatra ny 10 MW. Ho fanampin'izay, angatahina ianao hanova ny fomba fiasa, satria izao dia azo atao ny mampiroborobo azy ireo amin'ny alàlan'ny lavanty izay anomezan'ny Administrations azy ireo ho an'ny mpanome ambony indrindra, ankoatry ny fanokafana ny fahafaha-manao hatao miaraka amin'ny "promédition gratuit".
Tsy misy sarany
Ny fijanonan'ny angovo avy any rivotra any Catalonia dia nitranga satria nijanona ireo tetikasa vaovao ahazoana tombony tokoa rehefa nesorin'ny Governemanta ny saram-panambadiana tamin'ny 2012 nanana ny masinin-tseranana vaovao madio izy ireo. Ny vokatr'izany dia nijanona tanteraka ny paikadin'ny Generalitat hametrahana toeram-piompiana rivotra vaovao.
Nikasa ny hamorona ny faritra lehibe fampivoarana ny rivotra fito lehibe (ZDP) nozaraina nanerana an'i Catalonia (769 MW ary fampiasam-bola 1200 tapitrisa euro), saingy izany rehetra izany dia taratasy tsy maty.
Ao amin'ny enina amin'ireto ZPD ireto dia nanolotra ny fametraham-pialan'izy ireo ireo mpangataka mahomby, hatramin'ny toe-java-misy vaovao eo amin'ny sehatra, tsy misy tambin-karama amin'ny angovo rivotra mihoatra ny vidin'ny tsena, nahatonga ny tetikasan'izy ireo tsy ho vita. Noho izany, ny faritra fampiharana an'i Terra Alta ihany no mbola "velona" - ao amin'ny Vilalba dels Arcs, La Pobla de Massaluca ary Batea, izay manampy hatramin'ny 90 MW–, natokana ho an'ny Wind Natural Renovables-Alstom Wind. Ity tetik'asa ity, na izany aza, manangona fahatarana lava.
Raha ny filazan'ny Gas Natural dia tsy mahalala na inona na inona momba ny fahatarana izy io, satria efa natolotr'izy ireo ny antontan-taratasy ilaina rehetra.
Tsy tanteraka ny drafitra
Ny vola azo havaozina dia 2015% mahery tamin'ny angovo rehetra ateraky ny Catalonia tamin'ny 8. Ary ho an'ny fampiasana herinaratra, napetraka ny herin'ny rivotra 1.268 MW; 267.345 MW sy herinaratra thermoelectric an'ny masoandro 24 MW, eo amin'ireo loharano azo havaozina. Niaiky ny Administrations Catalan fa ny haavon'ny fanarahan-dalàna amin'ny drafitra any Catalonia ankehitriny (ny Plan d'Energia i Canvi Climàtic 2012-20120) dia "ambany dia ambany", izay manondro azy fa "ny fankatoavany dia nifanindry tamin'ny fanovana napetraka nampiato ny fivelaran'ny angovo azo havaozina ao Catalonia sy ny fanjakana sisa io ”.
Ilaina ny rafitra ara-dalàna vaovao
Raha ny filazan'ny fikambanan'ny angovo azo havaozina “Mihoatra ny drafitra vaovao, ny tena ilaina dia ny rafitra mifehy sy ny toekarena izay aza mametra sy mametra miaraka amin'ny fampidirana angovo azo havaozina (misy herin'ny rivotra maherin'ny 1.000 MW nahazo alalana fa tsy napetraka), ary fifanarahana ara-tsosialy sy faritany mamela ny fametrahana azy ireo amin'ny faritany ”.
"Ao amin'ny faritra mifehy, ny Generalitat dia miasa mba hamolavola rafitra vaovao mifehy izay mailaka kokoa sy izay manampy amin'ny fampiroboroboana ny angovo azo havaozina. Mikasika ny fifanarahana ara-tsosialy sy faritany, ny National Pact dia ny rafitra hanombohana hiady hevitra sy hamolavola ireo fitaovana hamahana ny fitoviana izay mihevitra fa ny fametrahana vaovao azo havaozina dia mitaky fibodoana lehibe amin'ny faritra sasany amin'ny faritany ”.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » 5 taona tsy misy rivotra MW vaovao any Catalonia
Ekoatoriana miteny hoe tsia amin'ny fitrandrahana solika any Amazon